Nepal Samaya | कंगो भ्रष्टाचार 'ब्रेक' गर्ने पत्रकार भन्छन्- निर्दोष सैनिकलाई सजाय दिइयो
अनिल यादव | काठमाडौं, सोमबार, असोज ११, २०७८
काठमाडौं- २०७७ साल असोज १२ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको राति ८ बजेको समाचार बुलेटिनमा सुरक्षा पत्रकार रमेश धमलाले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो– ‘नेपाली सेनाको कंगोस्थित शान्ति मिसनमा कुटपिटको घटनापछि आर्थिक अनियमितता प्रकरण सतहमा, कम्तीमा ४७ लाख हिनामिनाको आशंका।’ (भिडियोको १७ मिनेट ८ सेकेन्डदेखि)
धमलाको यही समाचारका कारण त्यतिबेला सेनाभित्र ‘कोर्ट मार्सल’ नै चलेको थियो। कोर्ट मार्सलले अनियमिततामा कसैलाई पनि दोषी देखेन तर सूचना चुहाएको आरोपमा दुई सहसेनानी राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङलाई जागिरबाट नै बर्खास्त गर्ने फैसला गर्‍यो।
त्यतिबेला आर्थिक अनियमिततामाथि हुनुपर्ने सेनाको अनुसन्धान कसरी सूचनाको स्रोततिर मोडियो? हामीले कंगो मिसनको दोस्रो शृंखलामै यसबारे चर्चा गरिसकेका छौं।
पढ्नुस्, नेपाल समयसँग पत्रकार धमलाले दिएकाे 'बयान' जस्ताको तस्तैः
म करिब १० वर्षदेखि अपराध तथा सुरक्षा मामिलामाथि रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। हिमालय टिभी, अनलाइन खबर डटकम हुँदै साढे चार वर्षयता कान्तिपुर टिभीमा कार्यरत छु।
मलाई थाहा छ, ब्यारेकीकरणको नीति हुनाले सैनिक संगठनको चरित्र अलि गोप्य नै हुन्छ। नागरिकसँग जोडिने विषय पनि कम नै हुन्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदि जोडिएका विषयमा रहेर हामीले धेरैजसो सेनाको समाचार बनाउने हो। पछिल्लो समय अलि बढी विकास निर्माणको जिम्मेवारी पनि पाएको भएर त्यताको पनि रिपोर्टिङ गर्ने गरिन्छ।
नेपाली सेनाको आन्तरिक सूचना बाहिर आउन अलि गाह्रै हुन्छ। हामी पनि जिम्मेवार पत्रकारका नाताले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संगठनको विषयमा के बाहिर ल्याउन हुन्छ, के ल्याउन हँदैन भन्ने कुरामा सचेत नै रहन्छौं।
नेपाली सेना त्यस्तो सुरक्षा संगठन हो, जोसँग एक खर्ब पैसा छ। कल्याणकारी कोषमा मात्रै ५०–५५ अर्ब छ, जुन सधैं ऊसँग नै हुने भयो। यता राज्यले हरेक वर्ष ५० अर्बजति बजेट छुट्याउँछ।
जहाँ राज्यको पैसा लगानी हुन्छ, त्यहाँ नागरिकको चासो रहन्छ नै। त्यसकारण पनि हामी त्यस्ता विषयमा समाचार बनाइरहन्छौं। विशेषगरी सेनाले गरिरहेको व्यापारबारे हामी लेख्छौं नै, लेखिरहेकै छौं।
सेनाभित्र को–कसरी पिल्सिन्छ, अवकाश पाएको हरेक सैनिक त्यसबारे जानकार हुन्छ। म त अझ के भन्छु भने सबैभन्दा बढी नातावाद चल्ने संगठन भनेकै नेपाल आर्मी हो। उनीहरुकहाँ मान्छे हेरेर सर्टिफिकेट छानविन हुन्छ, मान्छे हेरेर मिसनमा पठाउने–नपठाउने हुन्छ, मान्छे हेरेर समय थप्ने–नथप्ने कुरा हुन्छ।
सैनिक संगठनबारे रिपोर्टिङको चुनौती के हो भने सेनाबारे अलि ‘क्रिटिकल्ली’ लेख्यो भने उनीहरु त्यसलाई रेकर्डमै राख्ने गर्छन्। कहिलेकाहीँ ‘एक्सेस’ दिन नखोज्ने, सम्पर्कमा आउन नचाहने पनि हुन्छ। यद्यपि मलाई अहिलेसम्म खासै अप्ठेरो चाहिँ परेको छैन।
अब तपाईंले अहिले उठाइरहनुभएको ‘कंगो मिसन’को मूल मद्दामा जान चाहन्छु। ०७७ असोज ९ गतेतिरको कुरा हो। केही मिडियामा सैनिक अमल्दार नमराज माझी निर्घात कुटिएको खबर तस्बिरसहित सार्वजनिक भयो। त्यसपछि मैले मसँग सम्पर्कमा रहेका जुनियर तहका सिपाहीसँग यसबारे बुझ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितताको पाटो पनि सुनियो।
तर, यूएन मिसनसँग जोडिएको घटना भएकाले यो नेपाली सेनाको छविसँग पनि जोडिन्थ्यो। त्यसकारण मैले हचुवाको भरमा लेख्ने अवस्था थिएन। मलाई त प्रमाण चाहिन्थ्यो।
त्यसैले मैले मेरो सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर प्रमाणको खोजी गरेँ। त्यस्तो प्रमाण प्राप्त भयो, जहाँ औषधि खरिदका बेला स्थानीय एजेन्टले दिएको मूल्य र सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखियो। यस्तो प्रमाण प्राप्त भएपछि सूचना बाहिर ल्याउनु मेरो दायित्व नै थियो।
त्यतिखेर मैले सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलसँग पनि भेटेरै ‘भिडियो बाइट’ लिएँ। प्रवक्तालाई मैले यस विषयमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा उहाँले स्पष्टसँग छानबिन हुने प्रतिबद्धता नै जाहेर गर्नुभयो।
उहाँलाई फोन गरेको दुई दिनपछि मात्रै मैले उहाँको बाइट लिएको थिएँ। दुई दिन त्यस घटनाबारे बुझेपछि मात्रै उहाँ बोल्न तयार हुनुभएको थियो। मलाई लाग्छ, पक्कै अनियमितता भएको हुनसक्छ भन्ने लागेरै उहाँ बोल्न तयार हुनुभएको थियो।
सबैभन्दा बढी नातावाद चल्ने संगठन भनेकै नेपाल आर्मी हो। उनीहरुकहाँ मान्छे हेरेर सर्टिफिकेट छानविन हुन्छ, मान्छे हेरेर मिसनमा पठाउने–नपठाउने हुन्छ, मान्छे हेरेर समय थप्ने–नथप्ने कुरा हुन्छ।
जब उहाँले छानबिन हुने बताउनुभयो, मैले त्यसपछि उहाँको बाइटसहित ‘नेपाली सेनाको कंगोस्थित शान्ति मिसनमा कुटपिटको घटनापछि आर्थिक अनियमितता प्रकरण सतहमा, कम्तीमा ४७ लाख हिनामिनाको आशंका’ शीर्षकमा त्यो रिपोर्ट बनाएको थिएँ।
म यहीँनेर अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भने जब मलाई त्यो अनियमितताको सूचना प्राप्त भयो, मैले कंगोस्थित नेपाली सेनाको ज्वालादल गणको तत्कालिन प्रमुख रहेका कर्णेल शैलेन्द्र कोइरालालाई म्यासेज पनि गरेको थिएँ। विदेशमा भएकाले फोनमा सम्पर्क हुन सकेन, त्यसैले फेसबुकमा खोजेर मैले उहाँलाई म्यासेज गरेको थिएँ। तर, ‘रिप्लाइ’ आएन।
एउटा व्यावसायिक पत्रकारका नाताले त्यो समाचार मैले ‘होल्ड’ गर्ने अवस्था थिएन। जबकी त्यहीँका जुनियर तहका सैनिकहरुले ठूलो अन्याय भइरहेको बताइरहेका थिए।
जब रिपोर्ट प्रसारण भयो, त्यसपछि सैनिक वृत्तमा एकखालको तरंग नै पैदा भएछ। सैनिक मुख्यालयबाट ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ नै गठन भएर छानबिन सुरु भएको सूचना मैले पछि थाहा पाएँ।
छानबिन टोलीले त आर्थिक अनियमितता देखिएन भनेर पो प्रतिवेदन बनाएछ। तर, मलाई सूचना दिएको आरोपमा दुईजना क्याप्टेनहरुलाई जागिरबाट नै बर्खास्त गरिएछ।
यो खबर सुनेर म अचम्ममा परेँ। किनभने ती दुई सैनिक अधिकृत (राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङ) जसलाई कारवाही गरियो, उनीहरुलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनथें। उनीहरु मेरो सूचनाको स्रोत पनि थिएनन्।
एकजना राजेन्द्र सिम्खडा चाहिँ मेरै जिल्लाबासी (धादिङका) रहेछन्। एउटै जिल्लाको भएर त्यसरी अनुमानको भरमा कारवाही गरिएको भन्ने पनि सुनियो। यद्यपि यथार्थ थाहा भएन।
अचम्म त के छ भने घटना भएको छ कंगोमा, म यहाँ काठमाडौंमा थिएँ। तर कहिल्यै चिन्दै नचिनेको, भेट्दै नभेटेको दुवै अफिसरलाई मसँगको सम्पर्क भएको गलत आरोप लगाएर कारबाही भएछ। जबकि मैले प्रसारण गरेको त्यो समाचारसँग उनीहरुको कहीँ कतै संलग्नता नै थिएन।
पछि कारबाहीमा परेर जागिरबाट निकालिएपछि मात्रै उनीहरु ‘तपाईंको समाचारका कारण हामीलाई कारबाही गरियो’ भन्दै मकहाँ आइपुगे। म तीनछक परेँ।
त्यतिबेलै थाहा भयो, राजेन्द्र मेरो जिल्लावासी रहेछन्। अहिले पनि मेरो गाउँका सात–आठजना सेनामा अधिकृत तहमा छन्। म निरन्तर सेनाको रिपोर्टिङ गरिरहन्छु। यहाँ त मैले कुनै ब्यारेकमा भएको घटनाको समाचार लेख्दा संयोगले त्यो ब्यारेकभित्र मेरै गाउँको कोही व्यक्ति कार्यरत भएको पाइयो भने उसमाथि पनि कारवाही हुने खतरा देखियो।
प्रमाणसहित आर्थिक हिनामिनाको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि त त्यतातिर पो सुक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो त। तर, किन भएन? अझै प्रश्न बाँकी नै छन्।
कुनै तथ्यसबुत या प्रमाण विना साविती बयानकै भरमा कसैलाई कारवाही गर्नु त पक्कै न्यायोचित होइन। तर, राजेन्द्र र कुमारको हकमा त्यस्तै भएछ। जबकी उनीहरु निर्दोष थिए।
त्यतिबेला मैले फलोअप रिपोर्ट बनाउनेबारे नसोचेको होइन। तर, मेरै समाचारका कारण उनीहरुको जागिर गएकोे थियो, मैले रिपोर्ट बनाउँदा ‘यसलाई समाचार दिने यिनीहरु नै रहेछन्, त्यहीकारण यो तिनीहरुलाई जोगाउनतिर लाग्यो’ भनेर सेनाको शंकामा झन् बल पुग्छ कि भन्ने लाग्यो। त्यसैले म मौन बसेँ।
मलाई खड्किएको अर्को पाटो के हो भने त्यहाँनेर मलाई कसले सूचना दियो भन्नेबारे अनुसन्धान हुँदैगर्दा आर्थिक अनियमितता र अमल्दार कुटपिटको घटनालाई किन गम्भिरताका साथ लिइएन भन्ने हो। जबकी तिनै घटनाका कारण यो सबै कुरा बाहिर आएको थियो। तर, अचम्म के भने दुवै घटनामा प्रमुख दोषीलाई उन्मुक्ति भयो, सूचना दिएको आरोपमा निर्दोषलाई पो सजाय दिइयो।
यसले त नागरिकसँग सेनाको सम्बन्ध नै राख्न नहुने भयो। भोलि चिया खाएकै भरमा, सम्बन्ध राखेकै भरमा यसले सूचना चुहायो भनेर कारवाही हुने जोखिम बढ्यो।
मलाई सूचना दिएको आरोपमा जसलाई कारबाही गरियो, उनीहरु मेरो सूचनाको स्रोत थिएनन्। खासमा उनीहरु निर्दोष छन्। सैनिक अदालतको फैसलाले उनीहरुमाथि साँच्चै अन्याय भएको छ।
खासमा पछिल्ला केही घटनाहरुले नेपाली सेनाको न्यायिक प्रक्रिया गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ। चाहे त्यो चितवनको एसएमजी गन चोरी प्रकरणमा निर्दोषलाई जेल हालिएको घटनाले होस् या कंगो मिसनमा भएको घटनाले। कंगोमा कुटपिट भएका नमराज माझीलाई पनि कारवाही गरियो, कुटपिट गर्नेलाई पनि? यस्तो फैसलाले सैनिक अदालतले कारवाहीमात्रै गर्छ, न्याय दिँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।
अनुसन्धान भनेको त जसले गल्ती ग¥यो, उसलाई कारवाही गर्नलाई मात्रै हो र? पीडितलाई न्याय दिनलाई पनि होइन र? तर, यहाँ त सैनिक ऐनले सजायमात्रै गरिरहेको देखिन्छ, न्याय दिएको पाइँदैन। क्याप्टेनद्वय राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङकै कुरा गरौँ न। जब मैले मलाई सूचना दिएको आरोप लगाएर उहाँहरुलाई कारवाही गरेको सुनेँ, केही रात निदाउन सकिनँ।
कहिल्यै चिन्दै नचिनेको, कहिल्यै भेट्दै नभेटेको मान्छेलाई कारबाही भयो भन्दा कस्तो भयो होला, आफैं कल्पना गर्नुस् न। अझ मैले सुनेअनुसार सिम्खडा त मेजरमा बढुवा हुन लागेको अवस्थामा थिए। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई त्यसरी कारबाही गरिँदा परिवारमा के बित्यो होला, त्यतिबेला मेरो मनमा यस्तै कुरा खेलिरहे।
म जहाँ पुगेर पनि यो भन्न सक्छु, मलाई सूचना दिएको आरोपमा जसलाई कारबाही गरियो, उनीहरु मेरो सूचनाको स्रोत थिएनन्। खासमा उनीहरु निर्दोष छन्। सैनिक अदालतको फैसलाले उनीहरुमाथि साँच्चै अन्याय भएको छ।